OTU ESI ACHỌTA ADREESỊ IP SITE ADREESỊ MAC - WINDOWS - 2019
Adreesị IP nke ngwaọrụ netwọk ejikọrọ dị ya mkpa site na onye ọrụ na ọnọdụ mgbe a na-ezigara ya ụfọdụ iwu, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ maka akwụkwọ obibi na onye nbipute. Na mgbakwunye na nke a, e nwere ihe atụ ole na ole; anyị agaghị depụta ha niile. Mgbe ụfọdụ, onye ọrụ ahụ na-enwe ọnọdụ ebe ọ na-amaghị maka adreesị netwọk nke akụrụngwa, ma enwere adreesị nkịtị, ya bụ, adreesị MAC. Ịchọta IP bụ nnọọ ihe dị mfe site n'iji ngwaọrụ ndị dị na sistemụ arụmọrụ.
Kpebie ozi IP site na adreesị MAC
Iji mezuo ọrụ taa, anyị ga-eji naanị "Iwu iwu" Windows na nke dị iche iche na ngwa ngwa ahụ Notepad. Ịkwesighi ịmara usoro ozo, nhazi ma ọ bụ iwu, taa anyị ga-ama gị na ha niile. A chọrọ onye ọrụ ahụ naanị iji nweta adreesị MAC ziri ezi nke ngwaọrụ ejikọrọ iji chọkwuo ọchụchọ.
Ntuziaka dị na isiokwu a ga-aba uru dị ka o kwere mee naanị ndị na-achọ IP nke ngwaọrụ ndị ọzọ, ọ bụghị kọmputa ha. Ịchọpụta MAC nke PC nkịtị nwere ike ịdị mfe. Anyị na-akpọ gị òkù ịgụ isiokwu ọzọ banyere isiokwu a n'okpuru.
Hụkwa: Otu esi ele adreesị MAC nke kọmputa
Usoro 1: Ntinye iwu iwu
E nwere ọdịiche nke iji ederede iji mepụta ntuziaka ndị dị mkpa, Otú ọ dị, ọ ga-aba uru nanị n'ọnọdụ ahụ mgbe a na-eme mkpebi siri ike nke IP ọtụtụ ugboro. Maka nyocha nke oge, ọ ga-ezuru iji aka gị dee aha ndị dị mkpa na njikwa.
Mepee ngwa Gbaa ọsọijide isi nchikota Nweta + R. Tinye na ubi ndenye cmdwee pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Hụkwa: Otu esi agba ọsọ "Iwu Iwu" na Windows
Ịgụ nke adreesị IP ga-eme site na cache, n'ihi ya, ọ ghaghị ibu ụzọ jupụta. Ndị ọrụ maka nke an'ihi na / L% a na (1,1,254) mee @start / b ping 192.168.1.% a -n 2> nul. Rịba ama na ọ na-arụ ọrụ naanị mgbe ntọala netwọk dị, nke ahụ bụ, 192.168.1.1 / 255.255.255.0. Ma ọ bụghị ya, akụkụ (1,1,254) nwere ike ịgbanwe. Kama nke 1 ma 1 Abanyela na njirimara ikpeazụ nke netwọk IP arụnyere, na kama nke 254 - dobe mkpuchi subnet. Bipụta iwu, wee pịa igodo ahụ. Tinye.
I tinyela akwukwọ maka pinging netwọk niile. Iwu ntụziaka bụ maka ya. pingnke na-enyocha nanị otu adreesị a kapịrị ọnụ. Akwụkwọ edemede ahụ ga-amalite nyocha ngwa ngwa nke adreesị niile. Mgbe e mechara ịgụ isiokwu, a na-egosi akara ngosi maka itinyekwu ntinye.
Ugbu a ị kwesịrị ịlele ndenye ederede na iwu ahụ arp na arụmụka -a. Usoro ARP (Protocol resolution protocol) na-egosi na ederede MAC na adreesị IP, na-ewepụta ngwaọrụ niile achọtara na njikwa. Rịba ama na mgbe ejupụtasịrị, ụfọdụ ederede echekwara maka ihe karịrị 15 sekọnd, ozugbo ozugbo ejuputa cache, malite iṅomi site na ịpịarp -a.
A na - egosiputa ihe nchoputa na sekọnd ole na ole mgbe iwu adighi. Ugbu a ị nwere ike ịchọpụta adreesị MAC dị ugbu a na IP ya.
Ọ bụrụ na ndepụta dị ogologo ma ọ bụ na ịchọrọ ịchọta naanị otu egwuregwu, kama arp -a mgbe i mejuputara cache, tinye iwuarp -a | chọta "01-01-01-01-01-01"ebe 01-01-01-01-01-01 - adreesị MAC dịnụ.
Mgbe ahụ ị ga - enweta naanị otu nsonaazụ ma ọ bụrụ na ịchọta egwuregwu.
Nke a bụ ntụziaka dị mfe inyere gị aka ịchọpụta adreesị IP nke ngwaọrụ netwọk site na iji Mac dịnụ. Usoro a na-atụle chọrọ onye ọrụ iji aka tinye iwu ọ bụla, nke anaghị adị mfe mgbe niile. Ya mere, ndị ọ dị mkpa ka ị na-arụ ọrụ dị otú ahụ ugboro ugboro, anyị na-adụ gị ọdụ ịmara onwe gị na usoro ndị a.
Nzọụkwụ 2: Mepụta ma mee ihe edemede ahụ
Iji mee ka usoro ịchọta dị mfe, anyị na-atụ aro iji edemede pụrụ iche - usoro nke iwu na-amalite na njikwa. Naanị ị ga-eji aka gị mepụta edemede a, mee ya ma banye adreesị MAC.
Na desktọọpụ, pịa aka nri ma mepụta akwụkwọ ederede ọhụrụ.
Mepee ya ma kpoo ozo ndia n'ebe ahu:
ma ọ bụrụ na "% 1" == "" azaghachighị adreesị MAC & ọpụpụ / 1
maka / L %% na (1,1,254) mee @start / b ping 192.168.1. %% a -n 2> nul
arp -a | chọta / m "% 1"
Anyị agaghị akọwa ihe niile ahụ, ebe ị nwere ike ịmatakwu ha na usoro mbụ. Enweghị ihe ọhụụ ọ bụla agbakwunyere ebe a, naanị usoro a edozila ma tinyekwuo ntinye nke adreesị ahụ. Mgbe ịbanye na edemede site menu "Njikwa" họrọ ihe Zọpụta Dị ka.
Nye faịlụ ahụ na-enweghị aha, dịka ọmụmaatụ Find_mac, na mgbe aha gbakwunye.cmdsite na ịhọrọ ụdị faịlụ dị na igbe dị n'okpuru "Faịlụ niile". Nsonaazụ kwesịrị ịbụFind_mac.cmd. Zọpụta edemede na desktọọpụ gị.
Fọkwa echekwara na desktọọpụ ga-ele ya anya:
Gbaa ọsọ "Iwu iwu" ma dọrọ akwukwọ n'ebe ahụ.
A ga-agbakwunye adres ya na eriri, nke pụtara na ihe ahụ ejirila rụọ ọrụ.
Oghere Ntanetị ma tinye adreesị MAC na usoro a gosipụtara na nseta ihuenyo n'okpuru, wee pịa igodo ahụ Tinye.
Ọ ga-ewe sekọnd ole na ole na ị ga-ahụ nsonaazụ.
Anyị na-atụ aro ka ị mara onwe gị na ụzọ ndị ọzọ nke ịchọ adreesị IP nke dị iche iche na netwọk ngwaọrụ na ihe ndị anyị họọrọ na njikọ ndị a. Ọ na-enye nanị ụzọ ndị ahụ na-anaghị achọ ihe ọmụma banyere adreesị nkịtị ma ọ bụ ozi ndị ọzọ.
Hụkwa: Otu esi achọpụta adreesị IP nke kọmputa kọmputa / onye nbipute / onye ntanetị
Ọ bụrụ na ọchụchọ ahụ na nhọrọ abụọ ahụ ewetaghị ihe ọ bụla, jiri nlezianya nyochaa MAC ahụ abanye, na mgbe ị na-eji usoro mbụ, echefula na ụfọdụ n'ime ndenye n'ime cache echekwara maka ihe karịrị 15 sekọnd.